Ngaba usete iiparameter kwii-Webmasters? | Martech Zone
NgoLwesihlanu, Septemba 24, 2010 NgoMvulo, Oktobha 20, 2014 Douglas Karr
Kule veki, bendijonga iisayithi zabaxhasi zisebenzisa izixhobo zewebhu. Enye yezinto ezingathandekiyo ezichongiweyo kukuba uninzi lwamakhonkco angaphakathi kwisiza aneekhowudi zomkhankaso eziqhotyoshelwe kuwo. Oku bekukulungele umthengi, banokulandela umkhondo ngamnye weefowuni zabo zokwenza isenzo (i-CTA) kuyo yonke indawo. Ayisiyonto intle kakhulu yokuSebenza kweNjini yokukhangela, nangona.
Ingxaki kukuba iGoogle (injini yokukhangela) ayazi ukuba yintoni ikhowudi yomkhankaso. Kukuchonga idilesi enye kwindawo yakho njengee-URL ezahlukeneyo. Ke ukuba ndine-CTA kwindawo yam endiyitshintshayo ngalo lonke ixesha ukuvavanya kwaye ndibone ukuba zeziphi ezinye ezitshintsha ngakumbi, ndinokuphela:
Eli liphepha elinye ngenene, kodwa uGoogle ubona ii-URLs ezahlukeneyo. Ukuqhagamshela indawo yakho yangaphakathi kubalulekile kuba ixelela i-injini yokukhangela ukuba yeyiphi imixholo ebalulekileyo enzulu kwindawo yakho. Ngokwesiqhelo, iphepha lakho lasekhaya kunye nesiqulatho se-1 kude nephepha lakho lasekhaya zinobunzima obukhulu. Ukuba uneekhowudi ezininzi zomkhankaso ezisetyenzisiweyo kuyo yonke, uGoogle ubona amakhonkco ahlukeneyo kwaye, mhlawumbi, angabinobunzima nganye njengoko kufanelekile.
Oku kunokwenzeka ngamakhonkco angenayo avela kwezinye iisayithi ngokunjalo. Iindawo ezinje nge-Feedburner zisebenza ngokuzenzekelayo kwiikhowudi zomkhankaso ka-Google Analytics kwikhonkco lakho. Ezinye izicelo ze-Twitter zongeza iikhowudi zomkhankaso (njenge Ukhuseleko lwe-Twitter xa yenziwe). UGoogle ubonelela ngezisombululo ezimbalwa koku.
Enye indlela kukungena kwi Ikhonsoli ye Khangela yeGoogle akhawunti kunye Chonga iiparameter ezinokusetyenziswa njengeekhowudi zomkhankaso. Kuba google Analyticsisetwa ngolu hlobo lulandelayo:
Eli phepha liza kukuxelela ukuba zeziphi iiparameter ebizibonile kwindawo yakho, ke kulula kakhulu ukufumanisa ukuba ayikuchaphazeli na okanye hayi. UGoogle uthi:
Iiparameter ezinamandla (umzekelo, ii-ID zeseshoni, umthombo, okanye ulwimi) kwii-URL zakho zinokubangela uninzi lwee-URL ezahlukeneyo zonke zikhomba umxholo ofanayo. Umzekelo, http://www.example.com/dresses'sid=12395923 inokuthi ikhombe kumxholo ofanayo ne-http: //www.example.com/dresses. Ungachaza ukuba ufuna uGoogle angahoyi ukuya kuthi ga kwiiparamitha ezili-15 kwi-URL yakho. Oku kunokubangela ukukhasa okusebenzayo ngakumbi kunye nokumbalwa kwee-URLs, ngelixa unceda ekuqinisekiseni ukuba ulwazi olufunayo luyagcinwa. (Qaphela: Ngelixa uGoogle ethathela ingqalelo iingcebiso, asiqinisekisi ukuba siza kuzilandela kwimeko zonke.)
Isisombululo esongezelelweyo kukuqinisekisa Amakhonkco eCanonical zimiselwe. Kwiinkqubo ezininzi zokulawula umxholo, oku kungagqibekanga ngoku. Ukuba awunalo ikhonkco lekhonkco kwindawo yakho, nxibelelana nomboneleli wakho we-CMS okanye umphathi wewebhu ukufumanisa ukuba kutheni. Nantsi ividiyo emfutshane kwikhonkco zeCanonical, ezamkelweyo ziinjini eziphambili zokukhangela ngoku.
Qiniseka ukuba uzenza zombini - ngekhe ulumke kakhulu, kwaye inyathelo elongezelelweyo alisoze lenzakalise nto!
tags: I-google webmastersGoogle +enjini yokukhangela nounSEOwebmaster